ချစ်ကြည်အေး: နှစ်ထောင့်ဆယ့်နှစ်သို့ ပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်း
ရှင့်ရင်ခွင်ကန့်လန့်ကာကို ခဏလောက် လှစ်ဟခွင့်ပြုလှည့်ပါ
ရှင့်ရဲ့ကောင်းကင်မှာ ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကြယ်ကလေးတစ်စင်းပါ
သေချာတာက ကျွန်မဟာ ကဗျာတွေရေးကောင်းဖို့တစ်ခုထဲနဲ့တော့
ရှင့်ရင်ခွင်မှာ ခဏတာ ခိုလှုံခွင့်အတွက်
ဒီရေအတက်အကျလိုမြန်ဆန်တဲ့ ကျွန်မစိတ်တွေကို ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်
တစ်နေ့ ကျွန်မကို ထားသွားမယ်မှန်း သိသိနဲ့
သမုဒယတင်းကြိုးတွေနဲ့ မျက်ရည်ခါးခါးတွေ ဖျော်စပ်သောက်တတ်ခဲ့သူ
ကျွန်မဟာ တစ္ဆေတစ်ကောင်ကိုမှ စွဲလန်းခဲ့တဲ့ မျက်ကန်းတစ်ယောက်ရယ်…
တော်ရာမှာ ပျော်ကြဖို့ရာဆိုတဲ့ မဲပြာပုဆိုးဇာတ်လမ်းထဲ
ရှင်နဲ့ ကျွန်မ ရဲရဲကြီး ခြေစုံပစ်လိုက်ကြပါစို့ရဲ့…
ရှင့်အသံကြားတိုင်း ဘောင်ဘင်ခတ်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မ
ရှင့်လက်တွေနဲ့ ရေးခြယ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို
ခုချိန်မှာ "အလွမ်း"လို့ အမည်ပေးလိုက်ပါရစေ....
ညီမငယ် Black Roze ပစ်ပစ်ရဲ့ "၂၀၁၂သို့ ပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်း"ဆိုတဲ့ တက်ဂ်ပိုစ့်လေးပါရှင်။ ညီမပစ်ပစ်ရေ သတိတရ တက်ဂ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ချစ်ခင်စွာ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်....
Labels: တက်ဂ် လာသမျှ, ထုဆစ်ခံစား ကဗျာများ
blackroze Tue Jan 01, 01:27:00 PM GMT+8
pandora Tue Jan 01, 01:36:00 PM GMT+8
နှစ်ထောင့်ဆယ့်သုံးမှာလည်း ကာရန်တွေလှ ပျော်ရွှင်မြူးကြွပါစေ
mstint Tue Jan 01, 04:57:00 PM GMT+8
သမင်လည်ပြန် နှုတ်ဆက်အလွမ်းကဗျာလေး ကောင်းလိုက်တာ မချစ်ရေ။
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) Tue Jan 01, 09:21:00 PM GMT+8
ဒါဖြင့် ၂၀၁၂ ဟာ အလွမ်းနှစ်ပေါ့။
၂၀၁၃ က ဘာဖြစ်လာမလဲ မသိ။
ညီလင်းသစ် Wed Jan 02, 07:48:00 AM GMT+8
အလွမ်းကဗျာလေးကလည်း ချစ်စရာ ကောင်းနေပြန်ရော...၊း)
ကဗျာနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကိုလည်း သဘောကျတယ် အစ်မချစ်ကြည်အေး...၊ လည်ပြန် လှည့်ကြည့်နေတဲ့ စာကလေးတစ်ကောင်ဟာ ၂၀၁၂ ကို နှုတ်ဆက်ဖို့ အကောင်းဆုံး အဖော်ဆိုတာ အသေအချာပေါ့ဗျာ...။း)
သက်ဝေ Wed Jan 02, 08:55:00 AM GMT+8
ဓါတ်ပုံလေး သိပ်လှတယ် ချစ်...
Happy New Year 2013 နော်...
သဒ္ဓါလှိုင်း Wed Jan 02, 03:07:00 PM GMT+8
ကျန်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့ အလွမ်းတွေပေးတဲ့ အရာတွေပါပဲ.
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ဆန္ဒအားလုံး ပြည့်ဝပါစေ အမချစ်.
မိုးငွေ့........ Thu Jan 03, 06:20:00 PM GMT+8
ချစ်စရာအလွန်ကောင်းသော နှစ်ဟောင်းနှုတ်ဆက် ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေတည်း..။